Ahoana ny fomba hanafainganana ny metabolism anao ary hampihena ny lanjanao | Nutri Diet
Michael Serrano | | Torohevitra hampihenana lanja, Vatsim-pivelomana
Ny fahalalana ny fomba hanafainganana ny metabolisma dia mety hanampy be, indrindra raha manana metabolisma miadana ianao. Rehefa tsy ampy haingana ny metabolisma dia mety hanjary vato misakana anao tsy hahavery ny lanja ilainao na eo aza ny ezaka ataonao.
Metabolism no fomba sy isa ny vatanao ampiasaina hanovana ny sakafo ho angovo ary handoro azy. Noho izany antony iray mamaritra ny lanjany sy ny tavy amin'ny vatana izany. Ho fanampin'izay, manamarika ny hafainganana ahazoanao tavy na mampihena ny lanja. Jereo hoe inona ny zavatra mahomby indrindra amin'ny fampivoarana ny metabolisma ary amin'izany manomboka manomboka mandrehitra kaloria bebe kokoa izao.
1 Inona avy ireo antony mahatonga ny metabolisma miadana?
2 Zavatra manampy hanafainganana ny metabolism
2.1 Manaova fampihetseham-batana
2.2 Misotroa rano ampy
2.3 Mampiasà sira iode
2.4 Misotroa kafe
2.5 Mihinana fibre bebe kokoa
2.6 Manjifa vitamina B, vy ary calcium
2.7 Halaviro ny sakafo tsy mahazaka anao
Inona avy ireo antony mahatonga ny metabolisma miadana?
Araka ny efa fantatrao, misy metabolisme haingana sy metabolisme miadana. Izany no antony ahafahan'ny olona sasany mihinana ny zava-drehetra nefa tsy mitambesatra, ny sasany kosa mahita avy hatrany ny sakafo be loatra amin'ny andilany. Ary ny hafainganan'ny metabolisma no mahamaro ny kaloria azo lanina nefa tsy tsikaritra amin'ny maridrefy.
Ny miralenta, ny taona ary ny hozatry ny hozatra dia sasany amin'ireo antony manefy ny tahan'ny metabolika. SAINGY ny anjara toerana lehibe indrindra amin'ny taham-pahavoazan'ny fandoroan'ny kaloria ny vatanao dia ny génétique.
Ny olona manana metabolisma miadana dia mandova izany amin'ny ray aman-dreniny amin'ny alàlan'ny fototarazony. Ny metabolisma miadana dia mety miteraka olana toy ny lanjany be loatra sy ny matavy loatra. Satria misy fiantraikany amin'ny fampiasan'ny vatana ny angovo, Ireto manaraka ireto dia antony mahazatra hafa mahatonga ny metabolisme miadana:
Tsy ampy torimaso
Sakafo izay mahery vaika loatra, be tavy na ambany gliosida
Fitsaboana ara-pitsaboana sasany
Mandingana ny sakafo na manova fotoana fisakafoanana matetika
Zavatra manampy hanafainganana ny metabolism
Na izany aza, misy fahazarana mahasalama maromaro izay afaka manampy anao hanafainganana ny metabolisma. Ka raha miadana mandoro ny kaloria entinao ny vatanao dia andramo ireto torohevitra tsotra ireto.
Ny fampihetseham-batana dia heverina ho iray amin'ireo tetika tsara indrindra hanafainganana ny metabolisma. Ny fandehanana mihetsika dia manampy anao handoro tavy, ny fiangona izay mampihena ny metabolisma. Izy io koa dia manangana hozatra, izay zava-dehibe amin'ny metabolisma, satria arakaraka ny anananao hozatra no mahomby kokoa.
Milalao fanatanjahan-tena araka izany raha mbola tsy nanao, ataovy izay hahazoana antoka manambatra fanazaran-tena aerobika amin'ny fampiofanana matanjaka. Raha efa manao fanatanjahan-tena ianao dia mitadiava fomba hampidirana hetsika ara-batana bebe kokoa amin'ny fahazarana isan'andro. Ny fialana amin'ny sezanao isaky ny adiny roa hanitarana kely sy hanaovana ny plank na squats sasany dia hevitra tsara.
Ahoana ny fomba hialana bebe kokoa amin'ny fampiofanana mahery
Misotroa rano ampy
Afaka miadana ny metabolisma anao raha tsy misotro rano ampy ianao. Ny antony dia H2O dia mety hisy fiantraikany amin'ny fampiasana angovo, hampiroborobo ny fihenan'ny lanja. Aza adino koa ny manome antoka ny vatanao ny rano ilainy isan'andro. Ary tadidio fa afaka manome rano ho an'ny vatana ianao amin'ny alàlan'ny sakafo mahasalama maro. Ohatra tsara dia ny watermelon.
Mampiasà sira iode
Mila iode ny tiroida hitantanana metabolisma. Vidio sira iode fa tsy sira mahazatra. Tsara ihany koa ny maka antoka fa tafiditra ao anatin'ny sakafonao sakafo manan-karena iode, toy ny tranga amin'ny uddka.
Ny kafeinina dia iray amin'ireo zavatra mahomby indrindra amin'ny fanombohana ny motera metabolika.. Ny dite koa dia hamokatra vokatra mitovy amin'izany. Etsy ankilany, ny kafeinina dia tsy tokony ho an'ny olona voan'ny aretina sasany. Ka zahao amin'ny dokoteranao aloha sao hahasoa anao ny misotro kafe.
Mihinana fibre bebe kokoa
Betsaka ny sanganasa izay manondro fa ny ankamaroan'ny olona mihinana sakafo ambany fibre. Anisan'ireo tombontsoa marobe an'ity akora ity (izay azonao atao amin'ny sakafo maro) ny fandraisana anjara amin'izany tazomy hihazakazaka amin'ny fahaizany feno ny metabolismanao.
Manjifa vitamina B, vy ary calcium
Ny vitamina B, vy ary kalsioma dia anisan'ireo otrikaina izay nifandray tamin'ny metabolismana manafaingana. Ny voam-bary manontolo dia loharanon'ny vitamina B, raha ny momba ny vy kosa dia diniho ny epinara sy ny legioma toy ny tsaramaso na trondro. Ny kalsioma dia hita amin'ny vokatra ronono sy legioma toy ny broccoli na aviavy.
Halaviro ny sakafo tsy mahazaka anao
Betsaka ny olona lactose na tsy mahazaka gluten. Ny fivontosana izay mety hitranga ao amin'ny tsinay amin'ireny toe-javatra ireny dia hisy fiatraikany ratsy amin'ny lafim-pahasalamana isan-karazany, ao anatin'izany ny hafainganan'ny metabolisma. Rehefa manontany ny manam-pahaizana momba ny fomba fanafainganana ny metabolisma amin'ny alàlan'ny sakafo ianao, dia matetika koa izy ireo no manoro hevitra ny famerana ny sodium sy ny preservatives, izay mirongatra be amin'ny karazan-tsakafo fonosina rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Ahoana ny fomba hanafainganana ny metabolisma
Ny tombony fito amin'ny cranberry maina